ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Page 28 of 32 - Bamakhit
Home ပြည်တွင်းသတင်း Page 28
အွန်လိုင်းတွင်ပျံ့နေသည့် ဒုသမ္မတ၏ဓာတ်ပုံ ကိုဗစ်-၁၉ မတွေ့ခင်က ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်
ပြည်တွင်းသတင်း Bamakhit - April 15, 2020 0
လတ်တလောလူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ ဒုသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဝင် တဦးတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ကတည်းက ဖြစ်ပြီး အချိန် ၂ လကျော်ကြာသွားပြီ ဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ “ ကိုဗစ်-၁၉ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ...
ကလေးမြို့ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၇၄ ၏ နေအိမ်နှင့် လမ်းကို ပိတ်ထား
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့၊ တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ ၅၊ အိမ်အမှတ် ၅/၁၂၈ နေအိမ်က အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးတဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး စတင်တွေ့ရှိရလို့ သူ့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ လမ်းကို အသွားအလာကန့်သတ်ပိတ်ပင် Lockdown ချထားလိုက်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အတည်ပြုလူနာအမှတ် ၇၄ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ...
ဟိုပုံးမြို့နယ်၌ တပ်မတော်သားများအပါအဝင် လူပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကို Quarantine လုပ်ထား
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့မှာ အသက်ရှုကြပ်တာ၊ မောပန်းတာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသားတဦးနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင် လူပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကို Quarantine လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၁၂ ရက်က သေဆုံးသွားတဲ့အဆိုပါ လူနာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ဇနီးနဲ့...
ပဲခူးမြို့ ကလိဆေးရုံကို အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ လူနာတစ်ဦး သေဆုံး
ပဲခူးမြို့ဂျိုးသိန်းအထူးဆေးရုံကနေ အဆုတ်ရောင်လက္ခဏာတွေ့လို့ ကလိက ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေ ကုသဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ထားတဲ့ လူနာတစ်ဦး ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့မနက် ၅ နာရီဝန်ကျင်က သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ပဲခူးတိုင်း တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး ဒေါက်တာအေးငြိမ်းက DVB ကိုပြောပါတယ်။ --------------- ပဲခူးၿမိဳ႕ဂ်ိဳးသိန္းအထူးေဆး႐ုံကေန အဆုတ္ေရာင္လကၡဏာေတြ႕လို႔ ကလိက ကိုဗစ္-၁၉...
အင်းစိန် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကို သွားခဲ့သူ ရွှေကျင်မြို့က၃ဦးကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေ
ရန်ကုန် အင်းစိန်မြို့နယ်က ဗေသလနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေကျင်မြို့က ၃ဦး နဲ့ အတူနေမိသားစုဝင် ၃ ဦးကို ဧပြီလ ၁၄ရက်နေ့က Home Quarnatine စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် ရန္ကုန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္က ေဗသလႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကိုသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕က ၃ဦး နဲ႔ အတူေနမိသားစုဝင္ ၃ ဦးကို ဧၿပီလ...
ရှမ်းပြည်နယ် စီမံစီးပွားနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စားနပ်ရိက္ခာအတွက် လစာ ၁ နှစ်စာ လှူဒါန်း
ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စီမံစီးပွားနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက သူ့ရဲ့ လစာဝင်ငွေ တစ်နှစ်စာကျပ်သိန်း၁၅၀ကို တောင်ကြီးမြို့ စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့နိုင်ရေးကော်မတီကို ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ DVB TV News ျပည္သူေတြရဲ႕အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စီမံစီးပြားနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက သူ႔ရဲ႕ လစာဝင္ေငြ တစ္ႏွစ္စာက်ပ္သိန္း၁၅၀ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးေကာ္မတီကို ဧၿပီ...
ဘုံရန်သူ ကိုဗစ်-၁၉ ကို အောင်နိုင်ရေး ညီညွတ်ကြရန် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တိုက်တွန်း
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အားလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကို အောင်နိုင်ဖို့ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ကြဖို့နဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကို တိုက်ဖို့ လိုတဲ့အင်အားတွေကို ကိုယ့်အချင်းချင်း တိုက်ဖို့ မသုံးကြဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ကနေ တိုက်တွန်း...
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူ ၁၂ ဦးထပ်တွေ့၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၇၄ ဦးအထိရှိလာ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၁၂ ဦးထပ်တွေ့ပြီး ဧပြီ ၁၅ ရက် မနက် ၁၀ နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၇၄ ဦးအထိရှိလာပြီလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒီနေ့မနက်...
မကွေးတိုင်းက ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၅၃ ၏ ခရီးသွားရာဇဝင်
ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါအတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၅၃ (Case-53) လူနာရဲ့ ခရီးသွားရာဇဝင်နဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်တွေကို ဧပြီလ ၁၄ ရက်မှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြို့သစ်မြို့နယ် က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ Case-53 လူနာ အမျိုးသားဟာ မတ်လ ၂၉ ရက်...
ဒုသမ္မတနှင့် မိသားစုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ မတွေ့ရှိ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနဲ့ မိသားစုတွေ၊ သူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အပါအဝင် ၃၂ ဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိဘူးလို့ သမ္မတရုံးပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ “ဓာတ်ခွဲနမူနာယူ စစ်ဆေးသူ အားလုံး ၃၂ ဦးရှိပြီးတော့ ၃၂ လုံးမှာ ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိ...
ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာအသစ် ၁၂ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ ၊ စုစုပေါင်း (၇၄) ဦး ရှိပြီ
အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)သည် (၁၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ပေးပို့လာသော စောင့်ကြည့်လူနာ (၁၁၂) ဦးနှင့် အသွား အလာကန့်သတ်ခြင်း/ တားမြစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိသူ (၂၈၁) ဦးတို့၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ စုစုပေါင်း (၃၉၃)ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တွင် ဖော်ပြထားသူ (၁၂)ဦးတို့၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာ များတွင်...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်းမှာ မနေ့ ည ၇ နာရီခွဲခန့်အချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်မှုကို တိုင်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဦးစီးမှူးကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကာ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်က မီးသတ်ကားတွေအားလုံး လာရောက် ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ပေးခဲ့ကြပြီး ည ၈ နာရီမှာ မီးငြိမ်းသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လောင်တယ်ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘဲ မြင်တွေ့ရတဲ့အနေအထားအရ နေအိမ် အဆောက်အအုံ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတွေ ကလေးမြို့ဆေးရုံကို မရွှေ့ရေး ဒေသခံတွေကန့်ကွက်
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်ဆေးရုံမှာ ကုသနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ ဆေးရုံကြီးကို ပြောင်းရွှေ့ကုသမယ့် အစီအစဉ်ကို ကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအပါအဝင်၊ ကလေးမြို့အခြေစိုက် လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်း၊ ၈ လေးလုံးနိုင်ကျဉ်းအဖွဲ့၊ ချင်းတွင်းကွန်ရက်စတဲ့ ဒေသခံအရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့က ဧပြီလ...
နေပြည်တော်မှာ Quarantine ဝင်သူ ၃ ဦးကို စည်းကမ်းမလိုက်နာလို့ အရေးယူ
နေပြည်တော်၊ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ ၁ မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Quarantine Center မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခံနေတဲ့ သုံးဦးဟာဆိုရင် သဘာဝဘေး အန္တရယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀ (က) နဲ့ အရေးယူထားတယ်လို့ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ Quarantine...
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်များ အပြင်မထွက်ရန် တိုက်တွန်း
ပြည်တွင်းသတင်း Bamakhit - April 14, 2020 0
ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်ကာလအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ လိုအပ်မှ အပြင်ထွက်ဖို့နဲ့ အသက် ၆၀ ကျော် အရွယ် ပြည်သူတွေ အပြင်မထွက်ဖို့ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ဧပြီ ၁၃ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တိုင်းအဆင့် ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံပြန်ရေးကော်မတီရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ...
မန္တလေးက အကဲပို နေသလား ?
မန္တလေးက အကဲပို နေသလား ? ............................................... ရန်ကုန်ဟာ မန္တလေးထက် လူဦးရေ3ဆခွဲခန့်များပါတယ် ၊ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါသည်အရေအတွက်လည်း များပါတယ်၊မန္တလေး မှာက ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါသည် လောလောဆယ်အထိ တယောက်ပဲရှိပါသေးတယ် ။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ စားသောက်ဆိုင် လဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုရောဂါသည် တွေ့တဲ့ (24.3.20) မှာပဲtake away စံနစ်ဖြင့်သာ...